Igumbi lokulala labucala kwiKhaya eliNgcono kunye noBumelwane
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguJeanne
Igumbi lokulala elikhulu labucala elinebhedi enkulu yokumkanikazi, isinxibo, igumbi elikhulu kunye nokugcinwa. Ilungele abahambi, abafundi, ootitshala, abahloli kunye nokunye.
Ubumelwane obuzolileyo. Ukuhamba ngokulula ukuya kwikholeji yoluntu kunye nesibhedlele.
Ukuhamba ngokulula kwemizuzu eli-10 okanye ibhayisekile ukuya edolophini nakwisikhululo sikaloliwe.
Igumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo, igumbi lokuhlala, igumbi lokuvasa kunye nekhitshi kunye nolunye undwendwe okanye umamkeli.
Izinto eziluncedo kunye namanzi zibandakanyiwe kwintlawulo yenyanga.
Ayifanelanga abantwana okanye izilwanyana zasekhaya. Akutshaywa ekhaya.
Izinja ezi-2 eziphakathi zihlala kwipropati.
Ukukhangela umntu oza kuhlala naye endlini inyanga nenyanga. Indawo enkulu yabafundi, abaqeqeshwayo kunye/okanye abasebenzi esibhedlele, kwisikolo samabanga aphakamileyo okanye kwikholeji yoluntu. Igumbi liqaqambile kwaye lineefestile ezimbini- enye ivula ngasemva kweyadi.
Indawo elungileyo elungileyo. Iyadi elungiselelwe ngokumangalisayo ukuze ujabulele. I-North Cascades National Park isondele kunye namakhulu abaqalayo ukuya kuhambo oluphambili kunye neendawo ezimangalisayo!
32" HDTV ene-I-Netflix, I-Amazon Prime Video
Indawo enkulu yokuhamba, ukuhamba ngebhayisekile kunye neendawo zokukhwela intaba. Ngolonwabo lwamanzi - kufutshane neChibi elicacileyo kunye neChibi elikhulu. Ilungele ukuloba / ukuloba kuMlambo iSkagit kakhulu.
Kanye njengokuba bekhululekile kunye. Ndizakungena ndiphuma ekhitshini nakwigumbi lokuhlala ngamanye amaxesha. Ndisebenza ifom ndigoduka kwaye ndiqhubeke kwaye iiyure zam zinokwahluka kodwa ndihlala ndifumaneka ngefowuni okanye ngetekisi.